Kuvhiya Kwamafudzi kweParaplegics Inoda Wiricheya
Bendekete ndiyo inowanzo kuve nzvimbo yekurwadziwa zvinoenderana neavo vanoshandisa mawiricheya. Vanopfuura hafu yeavo vane mapfudzi akatakura uremu (vanhu vari pamawiricheya uye vanoshandisa madondoro) vanorwadziwa nepafudzi [Gellman, 1988; Sie, 1992; Finley, 2004].
Izvi zvinowanzo sanganisira subacromial nzvimbo pamwe neiyo rotator cuff, ine rotator cuff misodzi, shanduko inoshanduka, pamwe nemamwe maratidziro akakomberedza coracoacromial arch inowanzozivikanwa [Boninger, 2001; Escobedo, 1997].
Nyaya dzinowanzoitika isu dzatakatarisa nemapfudzi ane huremu ndeaya subacromial impingement (48%), rotator cuff misodzi (34%), biceps pathology (28%) (yakabatana necuff misodzi kazhinji) uye acromioclavicular joint arthritis (12%).
Nguva yekuremerwa pamwe chete nekushandisa wiricheya inopindirana nekufambira mberi kwemarwadzo mupfudzi (kureva kuti, nguva yawaive yakawanda kushandisa wiricheya ndizvo zvinoita kuti unzwe kuda kurwadziwa).
Asi zvakadaro, zero mutsauko waonekwa pakati pevasiri-vatambi nevamhanyi, nekudaro kubatanidzwa mune zvemitambo hakuzoite kuti mumwe munhu atapurwe nematambudziko epafudzi [Finley, 2004].
Mapfudzi Kutakura Kurema kunowanzo kuve nyore kubatwa nehutachiona nekuda kwe:
hunhu hunodzokororwa hwekufambisa wiricheya
simba repamusoro-soro rinoiswa kumhasuru dziri mubendekete
kuisa uremu pamapfundo epafudzi pakunyanyisa kwekufamba
mhasuru dzisina kusimba kana kusaenzana
kushushikana kwakanyanya kwemukati majoini pamwe nekuwanda madhiri akaiswa panzvimbo ye subacromial panguva yekutakura uremu kuburikidza nebendekete, kufambisa wiricheya uye kutamiswa.
Izvo zvakakosha kuti avo vakaremara vadzivise kubvarura muhombodo ye rotator sezvo zvichikosha kumabasa enguva dzose uye pasimba repafudzi. Simba rakakwana uye mashandiro anodikanwa kune ese ari maviri ekufambisa uye emaoko mabasa.
Kubvarura muhombodo ye rotator kunogona kukuvadza zvakanyanya. Iyo ultrasound scan inoshandiswa kuona iyo cuff inosvimha misodzi. Ichafanirwa kugadziriswa kana yakanganisika.
Kuvhiya Kwamafudzi Mumapfudzi Kutakura Kurema
Inogona kuva nguva yekushushikana zvikuru kune mumwe munhu anoda kuvhiyiwa kwepafudzi, kunyanya kana vakashandisa mapepa avo kuti vafambe. Rotator cuff inoda mavhiki ekuchengeta ruoko rwako rusingafambi muchipfuramabwe kuti upore.
Matambudziko nekuvhiyiwa ndechimwewo hanya kune avo vanovimba zvakanyanya pamapfudzi avo kuti vafambe.
Zvese zvekuvhiya zvine njodzi yezvinetso, asi matambudziko aya anoderedzwa nekuvhiya arthroscopic. Hakuna mhasuru zvinokuvadza kuwana mukana papfudzi, izvi zvinoderedza mukana wekukuvara kwemhasuru uye hutachiona, asi rudzi urwu rwekuvhiya runofanira kungoitwa navanachiremba vane ruzivo.
2. Kuvhiya kweposvo:
Varapi vane ruzivo vezvemabasa vanogona kubatsira zvakanyanya kuronga vachengeti preoperatives uye nhungamiro yekugara nechipfuramabwe.